भारतलाई नसोधि नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्नुहुँदैन - सांसद गिरि -
भारतलाई नसोधि नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्नुहुँदैन – सांसद गिरि
काठमाडौं। लामो समयदेखि विवा’दमा पर्दै आएको सीमा विवादलाई लिएर अहिले संसदमा खुब चर्चा हुने गर्दछ । यो बीचमा जनता समाजवादी पार्टीकी नेतृ एवम्‌ सांसद सरिता गिरीले देशको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुअघि भारतसँग कुरा नगरेकोमा असन्तुष्टि पोखेकी छिन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै गिरीले दुः’खेसो गरेकी हुन् ।
उनले भारत र चीनसँग सल्लाह नै नगरी नक्सा ल्याउने विषय विदेश नीतिविरुद्ध भएको पनि बताएकी छिन् । उनले भनिन, ‘सरकारले भारत र चीनसँग संवाद नै नगरी जुन ढंगले राष्ट्रपतिको मुखबाट नयाँ नक्सा निकाल्ने कुरा गरेको छ, यसले हाम्रो विदेश नीतिको क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ। एकातर्फ लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने भनिएको छ, अर्कातर्फ परराष्ट्रमन्त्रीले यसो गर्न संविधान नै बा’धक रहेको बताएका छन् ।
गिरीका अनुसार विदेश नीति जुवा होईन । अर्को फरक प्रशंगमा नीति तथा कार्यक्रम खोक्रो रहेको र सरकार अहिले सेनालाई व्यापारमा संलग्न गराएर त्यसैमार्फत भ्र’ष्टाचा’र गर्न लागिपरेको उनको आ’रोप छ । कोरोना महामारी निय’न्त्रण, राहत र विदेशमा रहेका नेपाली फर्काउनेबारे नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको पनि उनले बताएकी छिन्‌ । उनले संसदमा हिन्दीमा सम्बोधन गर्दै आएकी छिन् । वि’वादमा आउँने अभिव्यक्तिका कारण उनको आ’लोचना पनि धेरै नै हुने गर्दछ ।
काेराेना नियन्त्रणमा कहाँ चुक्याे सरकार ? राप्रपाले औँल्यायो ८ त्रुटि
‘नेपालको संसदमा अब भारतीय चेलीहरुको दादागि’री शुरु भएछ ‘ – गंगा चौधरी
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तलब कटौतीको माग
सरकारले संकटलाई अवसरमा बदल्ने मौका गुमायाे- डा. मिनेन्द्र रिजाल
सांसद विकास कोष खारेज गर्ने साहस किन नगरेको ? भन्दै नारायणकाजि जंगिएपछि…
सबै प्रकारका सम्पत्तिमा कर लगाउन डा. भट्टराईको सुझाव
अर्थमन्त्रीबाट पार्टीको अपमान भयो भन्दै नेकपा सचिवालय बैठकमा बामदेव जंगिएपछि…
रातारात एकता गरेको जनता समाजवादी पार्टी एक महिना पार गर्दा नगर्दै फुटको संघारमा